Izinwele zifakela ukuxuba: "Ukuphika okulula" kusuka kuBantwana bakaJohnson, i-spray yezingane "Izingane Ezincane"
Bonke abesifazane abanezinwele ezinde baphoqeleka ukuba bahlale bechitha isikhathi esiningi ekuhlanganiseni kwabo. Ngokunakekelwa okungalungile, ama-curls avame ukudideka, futhi ngenxa yalokho kufanele uwabeke njalo nsuku zonke futhi ufike ngezinwele ezihlukahlukene ukuze ungazihlanganisi kamuva. Kulula ukuguqulwa kwansuku zonke ngezinwele futhi wenze kube lula kakhulu ukuvumela umkhiqizo okhethekile wezithokozi - ukuhlunga izinwele ukuze uhlangane.
Izazi ze-Trichologists zibiza izizathu eziningana ukuthi kungani izinwele zifika ngokushesha. Okuvamile kakhulu ukulimala komshini ngenxa yokuxubha ngokugqoka izingubo. Izinwele ezinde zihlale zixhumana nezicubu, futhi ziqala ukusila. Kukhona ukwephulwa kobuqotho besakhiwo sezinwele, izikali ziqala ukuyeka ngemuva, lapho nazo zihlanganisa khona. Futhi, ukulimala ikhanda lezinwele kungabangela ukuhlangana okuvamile, ukusebenzisa izinwele zezinwele, ama-rubber bands, ngisho nomkhuba wokudlala ngama-curls, ukuhlanekezela izinwele ngezinsimbi.
Esinye isizathu sokukhipha izindandatho kukhona ukwephula emzimbeni. Izinwele ezingenangqondo zingabonisa inkinga yezempilo, ukungabi namavithamini.
Ukunakekelwa okungalungile kwansuku zonke kuvame ukuguqula indlela yokunethezeka yokukhiya okomile okukhiphekile. Ukusetshenziswa kaningi kwezinwele ezomileyo, ukufaka izinsimbi, imikhiqizo yokubhala, ukuveza ngezikhathi ezithile, kubangela ukulimala okungenakuqhathaniswa nezinwele. Ziba buthakathaka futhi zihlupha.
Abesifazane, izinwele zabo zihlala zididekile, kufanele zihambisane nezincomo ezilandelayo:
Ngokuvamile ukunciphisa amathiphu. Ngisho nezinwele ezihlanziwe kahle zizohlukaniswa ekugcineni. Uma zingabaliwe, zizoqhubeka zihlukanisa yonke ubude.
Ungasebenzisi i-hairdryer. Vumela izinwele zome ngokwabo.
Gwema ukudonsa njalo. Uma kungekho sidingo sokudaya izinwele zakho, kungcono ukuthi ungenzi.
Ungagudli futhi ugobe izinwele ngehawula. Izinsimbi ezimanzi zingahle zonakaliswe kalula.
Ngaso sonke isikhathi sebenzisa i-balm ngemuva kwesimiso.
Ngesonto elibili ngesonto kusebenza imaski enomsoco.
Nsuku zonke sebenzisa i-hair spray ukuze uhlangane. Kwenza kube lula ukuhlanza izinwele ngisho nokulimala kakhulu.
Sula uhlelo lokusebenza
Izinwele zifakela ukuxubha zenzelwe ikakhulukazi abesifazane abanezinwele ezinde. Izindlela zanamuhla zalolu hlobo ziqukethe ama-silicone, amafutha ahlukene kanye nezakhi ezenza ama-curls abushelelezi, ama-silky, futhi inqubo yokulwa ilula futhi ayibuhlungu. Kanti futhi ekwenzeni lesi senzo kuvame ukungezwa izinto ezisiza ukunciphisa ukufakelwa kwezinwele.
Indlela yokusebenzisa i-spray
Ukuze i-spray iphumelele, kubalulekile ukunamathela emithethweni elandelayo:
Njalo sebenzisa ukuhlanza izinwele.
Sula isipopu phakathi kwezinwele bese ululula ngesandla sakho kuze kube sekupheleni.
Ngaphambi kokuhlanganisa izinwele zakho, zibophe ngesandla sakho ukuze usakaze ngokulinganayo umkhiqizo.
Ungaphathi izinwele ezimpandeni, ngoba zingabheka amafutha.
Ngaphambi kokusebenzisa i-spray ukuze uthole izinwele ezilula, kufanele ufunde imiyalo nezincomo zomkhiqizi. Kuncike ekubunjweni, kunezindlela ezidinga ukusetshenziselwa kuphela izinwele ezimanzi, futhi zikhona lezo ezenza kuphela izinwele ezomile.
Kuthengiswa kukhona ukuphalaza kwezingane. Izinsana eziningi azithandi ukuhlamba futhi zibone le nqubo ngokukhala. I-spray yenza inqubo yokugqoka i-pigtails ende ibe yinto enhle kumama nendodakazi yakhe. Ngisho nabantu abadala bazithenga ngezinwele zezinwele zezingane. Ukuze uhlanganise izindandatho ezinzima futhi ezimele, kubuye kufane. I-baby sprays ithinta ngobumnene izinwele zonke, ishiya iphunga elimnandi. Umphumela ovela ekusetshenzisweni komkhiqizo ubonakala ngokushesha.
Abakhiqizi abaningi bezimonyo bakhiqiza imishini yokwelapha. Kodwa akuwona wonke umuntu osebenza ngokulinganayo futhi ongenabungozi. Ukuze ufeze umphumela omuhle kuphela, kubalulekile ukuyikhetha ngokulandela lemithetho elandelayo:
Thenga imikhiqizo yemikhiqizo eyaziwa kuphela. Abakhiqizi abakhulu bezimonyo ngokuvamile banama laboratories abo futhi bangakwazi ukuthuthukisa ngokuzimela nokuthuthukisa ukubunjwa kwemikhiqizo yabo.
Njengoba uzimisele ngomkhiqizi, ungaqhubeka nokukhethwa kwethuluzi lezici zangaphandle. Ibhodlela le-spray kufanele libe lukukhanya futhi libe nomumo wesandla.
Uma kukhona ithuba elinjalo, sebenzisa imali encane ezinyaweni zakho. I-spray yekhwalithi kufanele ibe nephunga elimnandi nombala ocacile. Kufanele unake ukunakekelwa kwe-curl. Akufanele kube khona ukukhanya kwe-greasy futhi kubambe ndawonye.
Ukuze uthole imiphumela emihle, kunconywa ukuthi usebenzise i-spray ukuze uhlanganise izinwele ezilula eziyinkimbinkimbi nge-air conditioning.
Spray "Ukuhlanganisa okulula" Ingane kaJohnson
Izinwele ezikhulayo zengane zincane, ngakho kulula ukudideka. Spray "Ukuhlanganisa okulula" kusuka ku-Babyson's Johnson kunomumo wayo womoya, okukuvumela ukuthi ulwe nezinwele eziboshwe futhi udale amafindo. Umkhiqizo usebenza ngokuphumelelayo ngisho nasezindlebeni ezide kakhulu nezikhahlayo.
Ngemuva kokusebenzisa i-spray, izinwele zengane ziba buthaka futhi zithobekile.
Spray "Ukuhlanganiswa okulula" yakhelwe ngqo izingane futhi kunomumo ophephile. Ihlolwe yi-ophthalmologists. Akumangazi amehlo uma kungena ngengozi kuwo.
Faka i-spray ingaba izinwele ezomile nezingenamanzi kusuka phakathi nobude bazo kanye namathiphu. Ngenxa yokwakheka okuyingqayizivele, umkhiqizo unakekela ngokucophelela ama-curls, ngaphandle kokuwenza ube lunzima futhi unomusa. Ngisho nezinwele ezingenangqondo kakhulu azigcini ngemuva kokusebenzisa i-spray.
Phuma ku-Jonson's Baby uye wadlula ucwaningo oluningi nokuhlolwa. Umkhiqizi uqinisekisa ukunakekelwa kahle nokuphepha kwamehlo nesikhumba somntwana. Uma kuqhathaniswa nemikhiqizo yamanye imikhiqizo, i-spray evela ku-Babyson's Johnson inokubunjwa okuthuthukisiwe.
Spray TM "Fairy encane"
Leli thuluzi likhiqizwa inkampani yaseRussia. Yenzelwe ukunakekela izinhlobo ezahlukene zezinwele zezingane. Ingasetshenziswa izingane kusukela eminyakeni emithathu.
Spray "Ukuhlanganiswa okulula" kusuka uphawu lokuhweba "Fairy Little" - intuthuko eyingqayizivele emkhakheni izimonyo zezingane. Iqukethe izitshalo ze-vanilla ne-chamomile, ezithatha kahle izinwele futhi zibe nomthelela wokwelashwa. Ithuluzi alusizo nje kuphela ukusiza ukulwa, kodwa futhi kuvimbela ukwakheka kwama-nodules.
Spray brand "Fairy Little" itholakala ebhodini elibomvu ngevolumu ye-nebulazer ye-160 ml. Umkhiqizo ngokwawo ubala futhi unomuncu omnandi we-strawberry. Ngokwemiyalelo, i-spray ingasetshenziswa ekomeni nasezintweni ezinamanzi ezibude obuhlukene.
Njengoba kwenzeka, abathengi abaningi bathenga i-spray ukuze bahlanganise izinwele zabo. Impendulo mayelana nokusetshenziswa kwaleli thuluzi iningi lihle. I-spray ikakhulukazi isisiza ukunakekelwa ama-curls amade, okuvame ukudideka ngama-nodules.
I-spray ethandwa kakhulu ivela kuJohnson's Baby. Ngokusho kokubuyekezwa, kuzwakala kahle, akunamatheli futhi kumile ngokushesha. Ngezinwele zezingane, i-spray ayiyona ingozi ngokuphelele. Ngiyabonga, izingane azihlupheki ukulwa nokude nokubuhlungu. Ama-curls asheshe abe abebushelelezi futhi abumnyama. Ezingalungeni zabathengi kuthiwa yizindleko eziphezulu.
Ukufuna okukhulu kusebenzisa futhi i-spray "Fairy Little". Abathengi babone intengo ephansi, isinyathelo esheshayo, ukwakheka okuphephile nokuthungwa okulula komkhiqizo. Abanye abasebenzisi abayithandi iphunga elimnandi le-spray.
Female imodeli zezinwele for ezimfishane: Photo
Kungani zezinwele Trendy for abafana, noma kanjani ukuze wenze ingane yakho enhle kakhulu?
Izinwele Pink: ukunambitheka nombala kwamalungu khona
Ukudweba imifanekiso emzimbeni amashiya: ukubuyekezwa kanye imicabango yabantu
Shampoo "Els Fibrologiya": Izibuyekezo Ochwepheshe
Mustard imaski izinwele. Odokotela mayelana izakhiwo zalo nenzuzo
Columnar apula izihlahla: izihlahla nokunakekela, isithombe
"Orchid" - tattoo kwabesifazane
Hygrophila ivolistny: isithombe, ukukhiqizwa kabusha, okuqukethwe aquarium
Kungaba ukukuthinta futhi ayisebenzi inzwa ocingweni, yini okufanele uyenze?
Injongo yokukhokha: yini ukubhala? Indlela ugcwalise imibhalo yokukhokha
Amazwe Asian: izici jikelele kanye nokuklanywa
Ukulungiswa Kwezinja: izici zenqubo kuye ngokuzalwa kwesilwane
Ikhishi nge - travel endzaweni lephephile
Ukunqoba Park, Ulyanovsk ikheli, imodi wokusebenza, ezikhangayo
Pilaf Samarkand - iresiphi ngesithombe
Naked (izimonyo): nokubuyekeza amakhasimende. Naked Eyeshadow Palette